छात्रृबृत्तिमा पढेकालाई कोरोनाको उपचारमा खटाइने मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा शुरु मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
चौकुने गाउँपालिकामा १५ हजार मास्क वितरण हुदै मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
कोरोनाले ७६ हजारको मृत्यु, १३ लाख संक्रमित ! कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ७६ हजार नाघेको छ । १३ लाख ६२ हजार संक्रमित छन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म संसारभर ७६ हजार ३ सय २८ जनाको ज्यान गएको छ । २ लाख ९३ हजार भने उपचारपछि घर फर्किएका छन । मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
विदेशका अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन आदेश कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा विदेशमा खाना, बस्न र उपचारको समस्यामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
अब राहत बाडेको फोटो फेसबुकमा राख्न नपाइने ! सरकारले कोरोना महामारीमा राहत बाडेको फोटो तथा भिडियो फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा नराख्न निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकाहरुलाई राहत वितरण गरिएका फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न सबै प्रदेश र पालिकालाई निर्देशन दिएको हो । मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
फ्रान्समा १४ सय र अमेरिकामा १६ सयको मृत्यु ! कोरोनाले एकैदिन अमेरिका र फ्रान्समा झण्डै ३ हजारको ज्यान गएको छ । मंगलबार अमेरिकामा साढे १६ सय र फ्रान्समा १४ सय जनाको ज्यान गएपछि दुई देशमा कोरोनाले एकैदिन मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै तीन हजार पुगेको हो । मंगलवार, चैत्र २५, २०७६
झण्डै ८२ हजारको ज्यान जाँदा १४ लाख संक्रमित कोरोना भाइरसका कारण संसारभर ज्यान गुमाउनेको संख्या ८१ हजार नाघेको छ । १४ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन । मंगलबार मात्रै कोरोनाका कारण झण्डै ७ हजारले ज्यान गुमाए भने ७० हजार नयाँ बिरामी फेला परेका छन । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख ! अमेरिकामा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या ४ लाख ५ सय ४० पुगेको छ । कोरोनाले झण्डै १३ हजार जनाको ज्यान गएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म अमेरिकामा १२ हजार ८ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
चौकुनेमा मास्क वितरण शुरु, सबै वडामा पुर्याइने ! विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सर्कुलरअनुसार चौकुने गाउँपालिकाले पनि मास्क वितरण अभियान शुरु गरेको हो । पहिलो चरणमा ल्याइएका १५ हजार मास्क १० वटै वडाबाट वितरण गरिने पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ८३ हजार नाघ्यो कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८३ हजार नाघेको छ । झण्डै साढे १४ लाख संक्रमित छन । कोरोनाले पछिल्लो समय स्पेनमा धेरैको ज्यान गइरहेको छ । स्पेनमा यो समाचार तयार पार्दासम्म १४ हजार ५ सय ५५ जनाको ज्यान गएको छ । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा बिरामीको मृत्यु ! धनगढीमा रहेको माया मेट्रो अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा कैलालीमा एक बिरामीको ज्यान गएको छ । मुटुको अप्रेसन गरेका उनको श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा ज्यान गएको आफन्तले बताएका छन । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
भारतमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ६४ पुग्यो भारतमा पनि कोरोना तिब्र गतिमा फैलिन थालेको छ । दैनिक ५ देखि १० जनासम्म ज्यान गइरहेको भारतमा अहिलेसम्म १ सय ६४ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै भारतमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
चराहरुको चियो (फोटो फिचर) त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जीवविज्ञानमा स्नात्तकोत्तर गरिरहेका खत्री वन्यजन्तु फोटोग्राफर पनि हुन । वन्यजन्तुमा पनि उनले चराहरुको विशेष अध्ययन र खोजी गर्छन । विभिन्न ठाउँमा जाने, चराहरुको अध्ययन गर्ने, फोटो खिच्ने, त्यसको अवस्था पत्ता लगाउने र नेपालमा तिनको पछिल्लो संख्या तथा वासस्थान खोजीमा खत्री तल्लीन छन । बुधवार, चैत्र २६, २०७६
कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ८८ हजार नजिक कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८८ हजार नजिक पुगेको छ । पछिल्लो चौबिस घण्टामा ५ हजार भन्दा धेरैको ज्यान गएपछि कोरोनाले मृत्यु हुनेको सख्ंया ८८ हजार नजिक पुगेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म ८७ हजार ६ सय ३ जनाको ज्यान गएको छ । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
ज्याला नपाएपछि जलविद्युत आयोजनाविरुद्ध उजुरी जाजरकोटमा काम गरेको तीन बर्षदेखिको ज्याला नपाएका मजदुरले ढोरेनी जलविद्युत उपभोक्ता समितिविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी गरेका छन । तीन बर्षदेखि जलविद्यूत आयोजनामा काम गरेपनि पारिश्रमिक नपाएपछि बाध्य भएर समितिविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी गरेको मजदुरी गर्ने स्थानीय युवाहरुको भनाई छ । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
कैलाली र कञ्चनपुरका ६६ जनामा कोरोना देखिएन धनगढी उपमहानगरपालिका–५ मा स्थानीयमा पनि संक्रमण देखिएपछि क्वारेन्टाइनमा रहेका एक सय ९८ जनाको नमुना संकलन गरेर काठमाडौं पठाइएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा त्यसमध्ये ६६ वटा नमुनाको परीक्षण सकिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेभिट आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
भारतमा पनि कोरोनाले डाक्टरको ज्यान लियो चीनमा जस्तै भारतमा पनि कोरोनाका कारण डाक्टरको ज्यान गएको छ । भारतको मध्य प्रदेशका ६२ वर्षीय डाक्टर शत्रुघ्न पञ्जवानीको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गएको बिबिसीले जनाएको छ । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
कोरोनाले झण्डै ९० हजारको ज्यान गयो अहिलेसम्म १५ लाख ३० हजारभन्दा धेरै संक्रमित छन । कोरोनाले सबैभन्दा धेरै इटाली, स्पेन र अमेरिकाका मानिसको मृत्यु भएको छ । इटालीमा १७ हजार ६ सय, स्पेनमा १५ हजार २ सय र अमेरिकामा १४ हजार ७ सय भन्दा धेरैको ज्यान गएको हो । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
राज्यमन्त्री रावतद्धारा गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले चौकुने गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन । दुई दिनअघि काठमाडौँबाट सुर्खेत पुगेका मन्त्री रावतले बिहीबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्ने चौकुने गाउँपालिकामै पुगेर स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन । बिहिवार, चैत्र २७, २०७६